Faalo:- MD Farmaajo wuu iska masixi waayay Godobtii uu ka galay Qalbi-Dhagax iyo ONLF - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeWararka MaantaFaalo:- MD Farmaajo wuu iska masixi waayay Godobtii uu ka galay Qalbi-Dhagax iyo ONLF
Kubadda cagta, marka laba kooxood oo xifaaltan ba’an ka dhaxeeyo, ayna dhexmarayso ciyaar kama danbays ah, lana gaadho dhamaadka ciyaarta, waqti dheeri ahna lagu daro 3min (extra Time), hadii labada kooxood midkood ay hesho Rigoore(penalty) loona dhiibo halyeeyga kooxda watana calaamada hogaamiyaha, (captain).
Fursadaas hadii uu gafo oo uu dhalin waayo waxaa loo yaqaan(gool gafto, gool lagaa dhali) carabtuna waxay dhahdaa( فرصة ذهبية لا تعود ولا تعوض) , fursadaas hogaamiyaha khasaariya hadii laga qaado koobka weliba kooxdii ay xafiiltamaan qaado, waxaa uu noqda halyeey ka hoos maray halkii laga rabay, ama flop(Sida dhalintu jeceshahay).
Fursadaas oo kale waxaa lamid ahayd su’aashii Mubaarik, Madaxweyne Farmaajo weydiiyey, waxay ahayd Fursadii ugu cajiibsanayd ee uu isaga dhiqi lahaa dhiriqdaa ka raacday dhibistii Cabdikariim SH Muuse(Qalbi-dhagax), waxaa uu helay waqtigii ugu munaasibsanaa uu dadka Soomaaliyeed ka dalban lahaa raali gelin, waxa uu dhaliisha dusha kasaari lahaa Saaxiibadiis xukunka ay ku kala tageen, balse jawaabtiisii aamuska ahayd waxaa loo fasirtay.
▪In Madaxweynuhu weli aaminsan yahay Qadiyadii lagu dhiibay Qalbidhagax uuna ONLF aaminsan yahay inay tahah Urur Argagaxiso ah.
● In Madaxweyne Farmaajo ahaa, shakhsigii dabinka dhigay, oo uusan haysan meel uu erkado, saaxiibkiis kheyrana yahay Eed-laawe.
Balse in madaxweyne Farmaajo lamid noqdo ninkii waalnaa ee dabka sitay gurigana kusoo socday ee la dhahay guriga ha gubin oo yiri hadaan xasuustay, ayaa ah arinkale oo mudan in loo toog hayo, ayna macquul tahay in Golaha cusubi ONLF ka saaraan liiska Argagaxisada si eedo dusha uga saaro Murashax ku wajihi doono Doorashada 2021.
W/Qorey:- Cabdiqani Xaamud